Emily Dickinson - Enigma mitohy
History & Culture Zava-dehibe
Momba ny fiainany
Fantatra ho azy: tononkalo fanesorana, navoaka taorian'ny nahafatesany
Daty: 10 Desambra 1830 - 15 Mey 1886
Antsoina koa hoe: Emily Elizabeth Dickinson, ED
Emily Dickinson, izay nanampy tamin'ny fampisehoana poezia maoderina, ny tononkalo mahavariana sy mamoron-kira , dia fanindrahindrana mitohy.
Ny folo amin'ireo tononkalony dia navoaka nandritra ny androm-piainany. Fantatray ny asany satria ny anabaviny sy ny roa amin'ireo mpinamana efa ela dia nitondra azy ireo ho amin'ny besinimaro.
Ny ankamaroan'ny tononkalo nosoratanay dia nosoratana enin-taona monja, teo anelanelan'ny taona 1858 sy 1864. Nofehezin'izy ireo tamin'ny volavolan-dalàna kely antsoina hoe fasika izy, ary efapolo tamin'ireo no hita tao amin'ny efitranony tamin'ny fahafatesany.
Nizara tononkalo niaraka tamin'ny namana tamin'ny taratasy izy. Avy amin'ireo sombin-taratasy vitsivitsy izay tsy nopotehina, tamin'ny fampianarany, rehefa maty izy, dia hita fa niasa tamin'ny taratasy tsirairay izy ho toy ny sombin-kery amin'ny tenany, matetika maka fehezanteny izay efa nampiasainy taona maro talohan'izay. Indraindray dia niova kely izy, indraindray dia niova be izy.
Sarotra ny milaza amin'ny tena hoe "tena" tokoa ny "tononkalo" nosoratan'i Dickinson, satria niova sy niova ary namerina izany imbetsaka izany, ka nanoratra azy ireo tamin'ny fomba hafa tamin'ny solontena samihafa.
Teraka tany Amherst, Massachusetts i Emily Dickinson. Ny raim-pianakaviana sy ny reniny dia samy antsointsika hoe "lavitra". Ny anadahiny, Austin, dia kamo saingy tsy mahomby; Lavinia rahavaviny, tsy nanambady mihitsy, ary niara-nipetraka tamin'i Emily ary niaro ny Emily mpihoko.
Emily any am-pianarana
Raha niseho maromaro ny famantarana ny endriny ivelany sy ny faharetany dia nandeha avy any an-trano izy hanatrika ny Tendrombohitra Holyoke Female Seminary , fikambanana iray momba ny fampianarana ambony natsangan'i Mary Lyons. Lyons dia nanao ny asan'ny mpisava lalana teo amin'ny fanabeazana ny vehivavy, ary nieritreritra ny Tendrombohitra Holyoke ho fampiofanana zatovovavy amin'ny andraikitra mavitrika eo amin'ny fiainana.
Hitany fa maro ny vehivavy azo ampianarina amin'ny maha-mpampianatra misiônera azy, indrindra indrindra hitondra ny hafatra kristiana amin'ny Indiana Indiana.
Ny olana ara-pivavahana dia toa efa tao ambadiky ny fanapahan-kevitry ny tanora Emily nandao ny Tendrombohitra Holyoke aorian'ny taona iray, satria hitany fa tsy afaka manaiky tanteraka ny fombam-pivavahan'ireo izay any am-pianarana. Saingy toa tsy nahita fahasamihafana ara-pinoana i Emily dia toa hita koa fa sarotra ny fiainana ara-tsosialy tao amin'ny Tendrombohitra Holyoke.
Nesorina ho amin'ny fanoratana
Nody tany Amherst i Emily Dickinson. Nivezivezy imbetsaka izy taorian'io - indray mandeha, indrindra fa tany Washington, DC, niaraka tamin'ny rainy nandritra ny fe-potoana nanompoany tao amin'ny Kongresy Amerikana. Saingy nihemotra tsikelikely tao amin'ny fanoratany sy ny tranony izy, ary lasa nivadika. Nanomboka nanao akanjo fotsy tanteraka izy. Taona maro tatỳ aoriana, tsy nandao ny fananan'izy ireo tao an-tranony izy, nipetraka tao an-tranony sy ny zaridaina.
Ny soratra nataony dia nahitana taratasy ho an'ireo namana marobe, ary raha vao tonga saina kokoa momba ny mpitsidika sy ny taratasim-bola izy fony izy zokiny, dia nanana mpitsidika maro izy: vehivavy toa an'i Helen Hunt Jackson, mpanoratra malaza tamin'izany fotoana izany, anisan'izy ireo. Nizara taratasy niaraka tamin'ny namana sy ny fianakaviana izy, na dia ireo nipetraka teo akaiky aza ka afaka nitsidika mora foana.
Fifandraisan'ny Emily Dickinson
Avy amin'ny porofo, tia lehilahy maromaro i Emily Dickinson, na dia toa tsy nieritreritra mihitsy aza ny fanambadiana.
Ny namany akaiky, Susan Huntington, dia nanambady an'i Austin, rahalahin'i Emily tatỳ aoriana, ary i Susan sy Austin Dickinson dia nifindra tany amin'ny trano teo akaiky. Emily sy Susan dia nanoratra taratasy mafana sy be herimpo nandritra ny taona maro; Ireo manam-pahaizana dia samy mizara ankehitriny amin'ny toetoetran'ny fifandraisana. (Ny sasany dia milaza fa ny fiteny tena tsara eo amin'ny vehivavy dia fitsipika tokana azo ekena eo amin'ny namana amin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo sy ny fiandohan'ny taonjato faha-20, ny hafa mahita porofo fa ny fifandraisana amam-pianakaviana Emily / Susan.
Mabel Loomis Todd, naterak'i John sy Priscilla Alden avy ao Plymouth, dia nifindra tany Amherst tamin'ny taona 1881 rehefa nanendry ny mpampianatra Amherst College, i David Peck Todd vadiny. Mabel dimy amby roapolo tamin'izany fotoana izany i Mabel. Samy lasa naman'i Austin sy Susan ny Todds - raha ny marina, i Austin sy i Mabel dia nanao raharaha.
Tamin'ny alalan'i Susan sy Austin, i Mabel dia nihaona tamin'i Lavinia sy Emily.
"Mifankafantatra" i Emily dia tsy ny filazalazana mety: tsy nifanatrika velively izy ireo. Navoakan'i Mabel Todd ary nahavariana ny tononkalo sasantsasany nataon'i Emily, namaky taminy an'i Susan. Tatỳ aoriana, i Mabel sy i Emily dia nanoratra taratasy sasantsasany, ary i Emily dia nanasa an'i Mabel indraindray hilalao mozika ho azy raha i Emily nahita maso. Rehefa maty i Emily tamin'ny taona 1886, nanasa an'i Todd i Lavin mba hanandrana hanova sy hamoaka ny tononkalo Lavinia hita tao amin'ny endrika sora-tanana.
Mpanome tanora iray sy ny namany
Ny tantara nosoratan'i Emily Dickinson, miaraka amin'ny fifandraisana mahaliana momba ny tantaram-behivavy dia nasongadin'ny vanim-potoana nahavokatra indrindra tamin'ny fanoratan'i Emily Dickinson, ny taona 1860 tany ho any. Ny toetra tena manan-danja amin'ity tantara ity dia fantatra tsara kokoa amin'ny tantara Amerikana ho fanohanana ny fanalàm - banana , ny fifidianana vehivavy , ary ny finoana transcendentalist : Thomas Wentworth Higginson . Fantatra amin'ny tantara ihany koa izy amin'ny maha mpitarika ny governemanta ny trozona mainty ao amin'ny ady an-trano Amerikana; Ho an'ity zava-bitany ity dia nampiasainy tamin-kafaliana ny lohateny hoe "Kolonely" Higginson mandra-pahafatiny. Izy no minisitra tao amin'ny fampakaram-bady Lucy Stone sy Henry Blackwell , izay namakiany ny fanambaran'izy ireo amin'ny fandàvany lozisialy izay napetraky ny lalàna teo amin'ilay vehivavy fony izy nanambady, ary nanambara ny antony hanohanan'i Stone ny anaram-bony fa tsy mihevitra ny Blackwell.
Higginson dia anisan'ny Renaissance literatiora fantatra amin'ny anarana hoe Transcendentalist . Izy dia efa mpanoratra fantatra ankehitriny rehefa namoaka tamin'ny 1862, tao amin'ny The Atlantic Monthly , fampahafantarana fohy mitondra ny lohateny hoe "Taratasy ho an'ny tanora tanora." Anatin'ity fampatsiahivana ity, nanangona "zatovolahy sy zatovovavy" izy hanolotra ny asany, ary nanampy hoe, "ny haino aman-jery dia mihinan-kanina sy mangetaheta vaovao."
Nolazain'i Higginson tatỳ aoriana (tao amin'ny The Atlantic Monthly , taorian'ny nahafatesany), io tamin'ny 16 aprily 1862, dia naka taratasy tany amin'ny paositra. Nanokatra azy io izy, ka nahita "sora-tanana iray maningana toy ny hoe ny mpanoratra dia mety ho naka lesona voalohany tamin'ny fianarana ireo vorona nalaza tany amin'ny tranombakoka tao amin'io tanàna io." Nanomboka tamin'ireto teny ireto izany:
"Manan-danja tokoa ve ianao miteny raha velona aho?"
Nanomboka ny taratasy nalefany nandritra ny taom-polo izay tsy naharitra afa-tsy tamin'ny nahafatesany iny taratasy iny.
Higginson, amin'ny fisakaizan'izy ireo ela (tahaka ny hoe nihaona indray mandeha indray mandeha na indroa izy ireo, fa amin'ny alàlan'ny mailaka), dia nandrisika azy tsy hamoaka ny tononkalony. Nahoana? Tsy miteny izy, farafaharatsiny tsy mazava. Mieritreritra aho? Nanantena izy fa ny tononkalony dia heverina ho sahiran-doha amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny mba ho ekena rehefa nanoratra azy ireo. Ary dia nanatsoaka hevitra ihany koa izy fa tsy ho azo ampiharina amin'ny fiovana heveriny fa ilaina mba hahatonga ireo tononkalo ho azo ekena.
Soa ihany ho an'ny tantara an-tsoratra, tsy mifarana ny tantara.
Fanitsiana an'i Emily
Taorian'ny nahafatesan'i Emily Dickinson, i Lavinia rahavaviny dia nifandray tamin'ireo naman'i Emily tamin'ny nahitany ireo fasika efapolo tao amin'ny efitranon'i Emily: Mabel Loomis Todd sy Thomas Wentworth Higginson. Nanomboka niasa tamin'ny fanovana i Todd voalohany; Avy eo i Higginson dia nanatevin-daharana azy, nandresy lahatra an'i Lavinia. Niara-niasa indray ireo tononkalo ho an'ny famoahana azy ireo. Nandritra ny taona maromaro dia namoaka tononkalo telo navoakan'i Emily Dickinson izy ireo.
Ny fanovana manova be dia nataon'izy ireo ho "fifehezana" ny fitenenana hafahafa nataon'i Emily, ny fampiasana teny, ary indrindra ny mari-pamantarana.
Emily Dickinson, ohatra, dia tia tady. Kanefa ny volan'ny Todd / Higginson dia nampiditra vitsivitsy tamin'izy ireo. Todd dia mpanoratra tontolon'ny tononkalo fahatelo, saingy nitazona ny fitsipi-panoratana niarahany niarahany.
Higginson sy Todd dia mety ho marina amin'ny fitsaràny, fa ny vahoaka dia tsy nanaiky ny tononkalo tahaka azy ireo. Ny zanakavavin'i Austin sy Susan Dickinson, Martha Dickinson Bianchi, dia namoaka ny fanontana nataon'i Emily Dickinson tamin'ny 1914.
Nijanona hatramin'ny 1950 izany, rehefa tononin'i Dick Johnson "tsy navoaka ny tononkalo" nataon'i Dick Johnson, mba hahalalan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny ny tononkalony araka ny nanoratany azy ireo, ary rehefa nandray azy ireo ny solontenany. Nampitahainy ireo dikan-teny tao anaty fasika, tao anatin'ireo taratasy maro naveriny, ary namoaka ny andiany miisa 1 700 tononkalo. Izy koa dia nanoratra sy namoaka lahatsoratr'i Dickinson, izy ireo mihitsy aza ny peratra manerantany.
Vao haingana, i William Shurr dia nanoratra amina tononkalo "vaovao", tamin'ny alalan'ny fitsangatsanganana poetika sy sombin-taratasin'ny taratasy nosoratan'i Dickinson.
Amin'izao fotoana izao, manam-pahaizana dia miresaka sy mifamaly amin'ny tsy firaharahiana sy ny tsy fitoviana amin'ny fiainan'i Dickinson sy ny asany. Ny asany dia tafiditra ao anatin'ny fanabeazana ny mahaolona ny ankamaroan'ny mpianatra amerikana. Ny toerany eo amin'ny tantaran'ny literatiora amerikana dia azo antoka, na dia mbola mistery aza ny fanaratsian'ny fiainany.
Raim-pianakaviana: Edward Dickinson (mpitahiry volan'ny Amherst College , mpanao lalàna amerikana, Kongresy Amerikana)
Reny: Emily Norcross
Zatovo roa: William Austin 1829-1895, Lavinia 1833-1899
Amherst Academy (fito taona)
Tendrombohitra Holyoke Vehivavy Seminera (herintaona)
Molly Dewson, Vehivavy ao amin'ny New Deal
Eleanor avy any Aotrisy
Maria Antoinette Image Gallery
Fotoana momba ny fampiharana amin'ny sekolin'ny lalàna
Top 10 Alfred Hitchcock Comedy Movies
Ahoana no hanohanana kisoa amin'ny pensilihazo
Fahatakarana ny "Schrodinger's Cat" fanadinana fanandramana
Jiosy ve ny anarako?
Famaritana string tao Ruby
Fomba 4 hanaovana fanoratana amin'ny teny anglisy
Ahoana no handoavan'ireo mpitory teny?
Ny SUVs folo miaraka amin'ny Economie tsara indrindra
Manonona ny Espaniola 'B' sy 'V'
Fonseca - Bio, Discography ary Top Songs
Ady lehibe faharoa: ady tao Taranto
Frank Lloyd Wright Talohan'ny 1900 - Trano voalohan'ny Prairie
Adihevitra ho an'ny Zoos
Ahoana ny fomba hamantarana ny voankazo mainty mainty
Eo am-piheverana (rhetorika)
Fanadihadiana ny 'Ireo miala amin'ny omelas' nataon'i Le Guin
Spoiler Alert! Ny fandefasana horonan-tsarimihetsika tsara indrindra
Fihetseham-piainana simika tsotra
Tantara sy ny fiovan'ny lozam-pifamoivoizana 9mm Luger
Jereo ny Geology Amerikana
Ny fankalazana ny Fe-potoan'ny Frantsay Candlemas ('Jour des crêpes')